Windows ကို 10: ပိုပြီး Microsoft က apps တွေကို Android နဲ့ iPhone မှလာကြ၏ - သတင်း Rule
Windows ကို 10: ပိုပြီး Microsoft က apps တွေကို Android နဲ့ iPhone မှလာကြ၏
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Windows ကို 10: ပိုပြီး Microsoft က apps တွေကို Android နဲ့ iPhone မှလာကြ၏” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 15 ဇူလိုင်လအပေါ်များအတွက် 2015 10.22 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ပြီးနောက် ဖြတ်တောက်ခြင်း 7,800 ဝန်ထမ်းများနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 7.6bn ဆုံးရှုံးမှုယူ ၎င်း၏ Windows Phone ဌာနခွဲအပေါ်, Microsoft ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Satya Nadella ၎င်း၏ app များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ iPhone နှင့် Android ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ကျူးကျော်တက်ကုန်းအားရည်ရွယ်ထား.
ထိုရေး-down ကို Microsoft က Nokia ထံမှဝယ်စမတ်ဖုန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အကြွင်း neutering အဖြစ်ထိရောက်စွာမြင်ဘူးခဲ့စဉ်က 2012, Nadella သူ့ကုမ္ပဏီစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တည်ရှိနေမြဲမဟုတ်ကြောင်းအလေးအနက်ဆိုသည်.
"ကျွန်မပဲအခြားဖုန်းတညျဆောကျချင်ကြဘူး, တစ် copycat ဖုန်းကို operating system ကို, ပင်. ငါသည်ခပ်သိမ်းသောမိုဘိုင်းအဆုံးမှတ်အပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်မည်ချင်,"Nadella နည်းပညာကိုဆိုက် ZDnet ပြောသည်.
"ဒါဟာအလွန်တိကျပြတ်သားအဓိကရည်မှန်းချက်င့်. အဲဒါ .... မဟုတ်ဘူး (ပဲ) ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှောက်လွှာ Endpoints ရှိခြင်း၏အယူအဆ, Skype ကို, သဘောတား, Wunderlist, နေထွက်, နှစ်ခုဘီလီယံခန့် devices များအသီးအသီးပေါ်။ "
Microsoft ကပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ် 60 Apple ၏ iOS device များအတွက်ရရှိနိုင် apps များနှင့်ဂိမ်းများ, ထက်မျ​​ားနှင့်ပိုမို 10 OneDrive အပါအဝင် Android အတွက် App များ, OneNote တို့ပါဝင်မှာ, ရုံး, outlook ကနဲ့ Xbox Smartglass.
အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်မကြာသေးမီကက Samsung အပါအဝင် Android စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူအပေးအယူလုပ်ခဲ့, Sony နဲ့ HTC ကကြီးမားတဲ့-နာမတော်ကိုမ devices များအပေါ် apps များ၏သေးငယ်တဲ့တပ်မတော် preinstall မှ.
'' Lumia devices များရှိပါလိမ့်မည် ''
အလွန်နည်းပါးကြီးတွေ-နာမကိုထုတ်လုပ်သူများက Windows Phone မွေးစားရပြီ. Microsoft ကဝယ်မှီတိုငျအောငျ Nokia ကမူလတန်းဟန်းဆက်မိတ်ဖက်ခဲ့, အနည်းငယ်သေးငယ်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူအကျိုးစီးပွားပြပေမယ့်.
ဒါပေမယ့်များသောကြောင့်တာဝန်ရှိသည်ကြီးအဖြစ်က Windows Phone Microsoft ကချမှတ်ခြင်းဖုန်းများမရှိဘဲသေမယ်လို့ခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်ပါပြီ 95% နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲအတွက်က Windows စ​​မတ်ဖုန်း.
Microsoft က devices တွေကိုလုပ်အခြားသူများသည်ဆော့ဖ်ဝဲကိုပေးလိုလားနေချိန်မှာ, Nadella ကအမျိုးအစားကပြောပါတယ်, "မျှလျှင် [လုပ်ငန်းရှင်] ငါတို့သည်သူတို့တည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ် Windows ကို devices တွေကိုတည်ဆောက်အထိရပ်တည်. Lumia devices များရှိရလိမ့်မည်။ "
Related: အဘယျသို့ပေ Microsoft ရဲ့ $ 7.6bn, 7,800-လူတစ်ဦး layoff က Windows Phone တွေအတွက်ဆိုလို?
အဆိုပါ Microsoft ကဦးခေါင်းကိုသောအမှုကြီးလျှင်တစ်ဦးက Surface-တူစမတ်ဖုန်း၏ပုံစံကိုယူမယ်လို့ပြောပါတယ် - Windows နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အရာကိုညွှန်ကိန်းအဖြစ်ဖန်ဆင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုနှစ်ခုစမတ်ဖုန်း, မဟုတ်ဘဲပင်မဖုန်းများထက်က Apple ၏ iPhone နှင့် Samsung ၏ Galaxy S6 နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ရန်.
Microsoft ရဲ့ပြဿနာက Windows ကိုရောင်းချခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဖြစ်ပါတယ် 10 စမတ်ဖုန်းကနေ Desktop ကွန်ပျူတာများမှ Device ရဲ့အကွာအဝေးတွင်ရရှိနိုင်ဖြစ်ရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းအပေါ်. ခပ်သိမ်းသောက Windows device ကိုအပေါ်ကို run ဖို့၎င်း၏ "universal apps များ" ဟူသောဂတိတော်; ၎င်း၏ "continuum" စနစ်က PC တွေအကြားချောမွေ့စွာ switching များကိုရည်ရွယ်သည်, ဖုန်းများနှင့် tablet များ, ဒါကြောင့်လက်တော့ပ်စ်သည်အဖြစ်ဟာသူ့ရဲ့ Microsoft က Edge browser ကိုဖုန်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုသူများမှအဖြစ်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ်.
အဲဒီအင်္ဂါရပ်များကိုအားလုံးသည်တစ်ဦးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အချို့ကိုပုံစံလိုအပ်. Nadella အနည်းဆုံးအနည်းငယ် "ပရီမီယံ" Lumia devices များကိုယခုနှစ်လွှတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့် Microsoft ယခုသူတို့ကိုဝယ်ယူရန်စားသုံးသူများနားချဖို့ဆိုတာတစ်ပင်ကြီးမြတ်နွဲနေစစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိစေခြင်းငှါ.
23670	1 Android မှာ, အပိုဒ်, computing, IOS ကို, iPhone ကို, Microsoft က, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, Software များ, နည်းပညာ, တယ်လီကွန်း, Windows ကို, Windows ကို 10
← အကျိတ်တွေကြီးထွားမှုကိုနှေးကွေးပြဟော်မုန်းအဖြစ်ရင်သားကင်ဆာမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်း သငျသညျအကြှနျုပျကိုတစ်ဦးစျေးပေါ Laptop ကိုရှေးခယျြကူညီပေးနိုင်ပါသည်? →